İzmir Karabağlar Metro 6 Complọ ọrụ asọmpi maka Nlekọta Injinịa | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Aegean35 IzmirLọ ọrụ 6 maka asọmpi maka Injin nke İzmir Karabağlar Metro
04 / 12 / 2019 35 Izmir, NTỤTA IHE, Auctions, ụgbọ okporo ígwè, Mpaghara Aegean, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Metro, Turkey
ụlọ ọrụ asọmpi maka nro nke ụzọ ụgbọ oloko Karabaglar
Lọ ọrụ 6 maka asọmpi maka Injin nke İzmir Karabağlar Metro; ; Na nro nke Karabağlar Metro, ụlọ ọrụ 6 nyere ọnụ ahịa. Ọ ga-emechi ihe ndị dị n ’ụbọchị ahụ na-abịanụ.
Emere ọkwa nke atọ na nro nke Karabağlar Metro project. Taa, a na-emeghe envelopes nke ọnụahịa nke ụlọ ọrụ 6 na-enye ọnụahịa na Mgbakọ nke Izmir Obodo ukwu. A ga-ekpebi mkpebi nke ndị dị nro bi na weebụsaịtị nke Izmir Metropolitan Obodo mgbe nyochachara kọmiti ahụ. A na-eme usoro izizi nke nro mbụ n'ọnwa Ọgọstụ.
Ihe nlere a bu:
RPA SRL 13 nde 700 puku TL,
Metro Istanbul Inc. 13 nde 855 puku 200 TL
Geoconsult ZT GmbH - TEKFEN Engineering Co. 15 nde 600 puku TL
Yüksel Proje International Inc. - Arup Engineering na Consulting Ltd. Sti. 16 nde 900 puku TL
Prota Engineering Project Consultancy Services Inc. 21 nde 500 puku TL
Su-Yapı Injinia na Nlekọta Ọrụ Inc. 37 nde 948 puku 800 TL
Izmir ga-abụ eriri ogologo metro
Ihe oru ngo a choro ichota nsogbu nke uzo njem di na Karabağlar ebe onu ogugu ndi mmadu di elu na obodo. Uzo a ga-ewu n’etiti Ebepınar na Adnan Menderes Airport ga-eso ụzọ Gaziemir, Eskiizmir, Eşrefpaşa, Çankaya, Basmane, Yenişehir na Halkapınar abụọ. Kilogram nke 28 ga-abụ eriri ogologo obodo n'ime obodo, yana ijikọ ebe obibi dị okirikiri, yana ebe azụmahịa dị mkpa dị ka Cistern, ESBAS, Fair Izmir, Kemeralti na Market Food.
A ga-arụzu ọrụ ikpeazụ na 2020. Mgbe emechara ngwa a na usoro nnabata ahụ, a ga-ewepụta ngwa maka owuwu ahịrị ahụ. Ọ bụrụ na enweghị oge na nnabata ahụ, a na-atụ anya iwu ebepịnnar-Karabağlar metro mgbe afọ abụọ gachara.
İzmir Obodo ukwu ga-agụnye Karabağlar na netwọ ụgbọ njem ụgbọ oloko. Ihe oru ngo na uzo eji acho ebepınar-Karabağlar metro line malitere.
Obodo polzmir Metropolitan na-eme usoro ọhụụ iji mepụta usoro ụzọ ụgbọ okporo ígwè 179 kilomita. Ngalaba Na-ahụ Maka Obodo na polzmir Metropolitan Municipal na Rail System, nke dị nro maka ọrụ ebepınar-Karabağlar metro. Ihe nro ahụ mere ma nata ikike. Ọ bụrụ na enweghị mgbochi n'etiti oge iwu, a na-ezube nkwekọrịta iji banye na ụlọ ọrụ na-emeri emeri na December 2019.
A na-atụ anya ịmalite owuwu na afọ abụọ
2020 ga-arụzu ọrụ ikpeazụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ebu ụzọ tinye akwụkwọ maka “nnabata” na General Directorate of Infrastructure Investment of the Ministry of Transport and Infrastructure and then to the President of Strategy and Budget. Oge a tụrụ anya ka ọ were ihe dịka afọ abụọ. Usoro owuwu na usoro ihe eji ewu ihe ga - amalite site na ntinye nke oru a na mmemme itinye ego. A ga-ewu eriri kilogram 28 n'okpuruala. Ọ bụrụ na-egbughi oge n’usoro nnabata, a na-atụ anya iwu ebe Halkapınar-Karabağlar metro ga-ebido n’ime afọ abụọ.
Mayorzmir Onye Isi Obodo Mayor Tunç Soyer kwuru na a ga-ewute eriri metroro na İzmir Main Transportation Master Plan n'okporo ụzọ Ebepınar Konak Bozyaka Eskiizmir Street-Gaziemir-Yeni Fair Ground-Adnan Menderes Airport. Soyer kwusiri ike na ihe dị ka puku mita 16 nke igwe ga-arụ tupu arụ ọrụ ahụ. Onu ogugu onu ogugu uzo ihe eji edo edo edoro anya. A ga-ekpebi ihe niile n'oge usoro ọrụ ahụ, n'ihi data ndekọ ọnụ ọgụgụ na nyocha anyị na-eme ụmụ amaala anyị. Na mgbakwunye na ọrụ ụgbọ oloko Buca na-aga n'ihu na usoro dị nro, Narlıdere tinyekwara usoro Karabağlar metro na atụmatụ anyị. Site na ọrụ ndị a niile, anyị ga-ahapụrụ otu ọkwa dị oke mkpa n'ụzọ iji eriri ironzmir wee jiri sọks.
Ebepınar Karabağlar metro ahịrị
Ụlọ ọrụ 5 mepụtara maka ọrụ Buca Metro
Ọrụ Nleta na Injinịa maka BBlọ Ọrụ Ikuku Usoro Ahụ ụgbọ njem Istanbul BB…
Ụlọ ọrụ 15 na-asọmpi maka Narlıdere Metro
Ụlọ ọrụ 38 ga-asọmpi maka Narlıdere Metro
Istanbul BB Kartal - Kaynarca Metro Construction na ọrụ electromechanical…
Ankara-Izmir bụ otu n'ime ndị kasị ibu contracts na-eme site na Republic of Turkey ...
Ndị na-eto eto na-eto eto na Izmir
Ndị na-aga ọmụmụ ihe na-agba ọsọ ski maka oge mbụ na Sarıkamış
3. 11 ike ga-asọ mpi maka mmiri
3. Ọnụ ọgụgụ nke ndị ụlọ ọrụ na-asọmpi na Bridge Dezie ruo 3
Enderzmir Karabağlar Subway Engineering Tender
Wayzọ ụgbọ oloko Karabağlar
Egosiputara nke ụzọ ụgbọ oloko Karabağlar
Karabağlar Metro Project dị nro